Abasebenzi beWalmart bazakusebenza neMac ukuqala kunyaka olandelayo | Ndisuka mac
Abasebenzi beWalmart bazakusebenza neMac ukuqala kunyaka olandelayo
Ngubani ongayazi iWalmart, yinkampani yokuhanjiswa kwamazwe aphesheya, ikakhulu ebekwe eMelika naseMexico. Ngawo amasebe agcina ukugqwesa kwelizwekazi laseMelika. Namhlanje siyayazi i isivumelwano phakathi kweWalmart kunye neApple ukuze bonke abasebenzi kwityathanga lokuhambisa basebenze neMac ukuqala kunyaka ozayo. Okwangoku, malunga nabasebenzi abangama-7.000 bane-Mac njengovavanyo lokuqhuba. Inkampani ijonge ukuba abasebenzi bayo abangama-100.000 babe nekhompyuter ye-Apple kwisithuba seenyanga ezili-12. Ngale ndlela, iWalmart ilandela ekhondweni le-IBM, elenza isenzo esifanayo kunyaka ophelileyo.
Kwakungexesha lokubhiyozela u INkomfa yoMsebenzisi weSizwe iJamf, apho Imayile yokufunda Ingcali yeWalmart ibhengeze isivumelwano ekufikelelwe kuso noApple. Umnyhadala udibanisa iingcali kunye noluntu ngokubanzi, abafuna ulwazi lwetekhnoloji yolwazi, kodwa bagxile kwimveliso kunye nezixhobo zeMac kunye ne-iOS. Ngokukodwa, olu khuphiswano lunemimandla emibini: Isisombululo seMac ukuhanjiswa kunye nezixhobo ze-iOS kwishishini. U-Leacy uchaze ukuba iMac inokuba liqonga elisisiseko kubasebenzi bakhe abaninzi.
El mpikiswano malunga nokusetyenziswa kweekhompyuter zeMac kwiinkampani inento yokwenza neendleko zesi sixhobo. Kwi-IBM kunye neWalmart la maqela ngamaxabiso okonga. Ngaphandle kotyalo-mali oluphezulu lokuqala, izixhobo zinenzuzo enkulu xa sithathela ingqalelo ukonga kulondolozo, i-antivirus kunye nokuhlala ixesha elide kweemveliso. Ekuhambeni kwexesha, ii-Macs zikhathalelwe kwaye zigcinwe ngokufanelekileyo zinokusebenza ngakumbi kwishishini lakho. Okokugqibela, ixabiso elishiyekileyo leekhompyuter zeMac kwixa elizayo liphezulu kakhulu kuneekhompyuter zemveli zePC. Nangona kunjalo, inkampani kufuneka ilungelelanise ezinye iinkqubo kwindlela yokusebenza ye-macOS.
Amava e-IBM abalulekile kwimibutho emikhulu. Ke ngoko, kulula kwamanye amazwe ukuba ahambe kule ndlela yokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Abasebenzi beWalmart bazakusebenza neMac ukuqala kunyaka olandelayo
Ngaba ukhona omnye umntu oye waqaphela ukuba "iWalmart" ayibhalwanga kakuhle?
UJavier Porcar sitsho
Enkosi uSantiago! LUNGILE. Kwaye uxolo ngempazamo. Ndicinga ukuba impazamo iza kuba umxhasi wam eyipela gwenxa. Okanye mhlawumbi ndinempazamo. Ukubulisa
IArgentina ifuna utshintsho kwinkcubeko kaWal Mart
I-Apple ikhupha i-beta yesihlanu ye-MacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.1 yabaphuhlisi
AbezonxibelelwanoMate, umphathi obalaseleyo kwiinkampani